Qormada Kuliyada ee Somalia
Ma u baahan tahay caawimaad qoris xirfadeed? Ka hel warqad tayo sare leh Qormada Kulliyadda ee ugu wanaagsan Somalia ku qoran dhammaan heerarka tacliimeed.
Gargaarka Qorista Qormada Xirfadleyda
Adeegyada Qorista Qorista ee Kuleejka ayaa noqon doona geesigaaga haddii aad isku aragto inaad ku xanniban tahay shaqo weyn oo tacliimeed, ama xaalad kasta oo kale oo xirfadahaaga aqooneed ay ugu baahan yihiin dib-u-habeyn wanaagsan. Qormada kulleejadu waa nooc culus oo loo diro. Qof kastaa ma awoodo inuu fikradihiisa si hufan ugu dhajiyo warqad dhammaan kunka qof ee akhriya. Sidoo kale, qorista maqaalka kuleejka waxay qaadataa waqti aad u badan, waxaana laga yaabaa inaad waqtigaaga ku gaabi karto.
Markii lagaa codsado inaad mid qorto, waxaa jira farsamooyin kala duwan oo ay tahay inaad adeegsato si aad u hubiso in qoraalkaagu uu noqon doono midka ugu wanaagsan ee ay suurtagal tahay. Midkood waa in la helo caawimaadda qof khibrad u leh qorista qormada. Warka fiicani waxa weeye inay hadda jiraan saraakiil fara badan oo gelitaanka kulliyadda ah oo runtii shaqaalayn doonta dadka si ay u qoraan waraaqahaas lagama maarmaanka ah. Waa inay aad uga taxaddaraan cidda ay shaqaaleeyaan, in kastoo, maxaa yeelay kaliya xulashada arday u qalma kama shaqeyn doono dantooda.
Qoraallada kulleejada, waxaa muhiim ah in qoraagu uu garanayo sida qormada si habboon loogu qaabeeyo, sidoo kale waa inuu ka feejignaadaa xeerarka kala duwan ee ku saabsan maqaalka kulliyadda. Qormada aad ku dambeyso waxay leedahay wax badan oo ku saabsan habka qoraagu u qaabeeyo qormada. Si aad ugu guuleysato qorista maqaalka kulliyadda, waa inaad xasuusataa si aad aragti ugu yeesho akhristaha, waa inaad taqaanaa sida loo soo bandhigo qormada si sax ah. Qormo si xun loo qoray waxay runtii hubaal siin doontaa aragti diidmo ah, waana sababtaas tan aad ugu baahan tahay inaad qorto qoraa maqaal wanaagsan.
Haddii aadan rabin inaad qatar u gasho inaad qorto adeegga qorista maqaalka kulliyadda, markaa waxaa jira hab kale oo aad ku qori karto qoraalada kulliyaddaada. Waxaad weydiisan kartaa xoogaa qorayaal khibrad leh inay kaa caawiyaan mashruucaaga, dhibaatada kaliyana waxay tahay inaad adigu bixiso iyaga. Tani waa sababta oo ah qorayaasha khibrada leh ayaa badanaa khibrad badan leh markay tahay curinta iyo qaabaynta qoraalada. Marka, haddii aad rabto inaad adeegsato qoraa khibrad leh, waa inaad wax yar u diyaariso mashruuca. Waad abaabuli kartaa shaqadii aad soo qabatay ka hor intaadan bilaabin, waxaadna u baahan tahay inaad sameysato shax adag ka hor intaadan bilaabin. Waa muhiim inaad fikrad ka haysato waxa aad doonaysid in qoraalkaagu u ekaado intaadan bilaabin.
Marka aad diyaariso dulmar aad u baahan tahay inaad adeegsato, markaa waa inaad qortaa maqaalkaaga ugu muhiimsan. Waxa ugu muhiimsan halkan waa in la abaabulo xogta aad soo ururisay, ka dibna loo abaabulo sida ugu wanaagsan ee suurtogalka ah. Masuuliyada ugu weyn ee qoraaga ayaa ah inuu abaabulo dhamaan xogta oo uu u adeegsado sida ay qormadu ugu muuqato mid soo jiidasho leh oo cajiib ah. Waqtiga kama dambaysta ah ee qoraagu wuxuu ku saleysan yahay adeegyada qorista maqaalka kulliyadda, waana marka ay tahay inaad u adeegsato dhammaan khibradaada si aad u hubiso inaad la kulantay waqtiga kama dambaysta ah. Haddii aad samaysay dulmar la yaab leh, oo aad qorshe ka sameysay sida loo abaabulo xogtaada, markaa waxaad awoodi doontaa inaad la kulanto waqtiga kama-dambeysta ah oo aad kasbato shahaadada kulliyadda.
Waa inaad haysataa wakhti kugu filan oo aad ku dhammaystirto shaqadaada si aad u kasbato shahaado. Qoraagu waa inuu tixgaliyaa tirada shaqooyinka aqooneed ee ay tahay inuu qabto, waana inuu hubiyaa inuu heysto waqti ku filan si uu isaga ama iyadu u dhammeeyaan shaqada oo dhan. Haddii aad haysato mashaariic badan oo aad qabato, markaa tani dhib kuguma noqon karto, laakiin qorayaasha maaddada xirfadda leh waxay yaqaanaan sida loo abaabulo shaqadooda waxayna sidoo kale yaqaanaan sida loo qorsheeyo maadooyinkooda si ay dhammaantood waqtiga ugu dhammaystiraan.
Waxaad awoodi doontaa inaad ka hesho caawimaad badan qoraaga hadaad internetka ka baartid, maadaama ay jiraan ilo badan oo loo heli karo qorayaasha inay adeegsadaan. Qaar ka mid ah ilaha aad ka heli karto internetka waa maqaal muunad hordhac ah oo bilaash ah, muunado shaqooyin kale oo qoran, iyo xitaa qoraallo muunad ah oo ay horay u qoreen qoraayo guuleystay. Kheyraadkan, waxaad awood u yeelan doontaa inaad fikrad fiican ka hesho nooca qormada caawimaadda aad uga baahan tahay qoraaga. Waxaad sidoo kale awood u yeelan doontaa inaad aragto tayada qoraalkiisa iyo sida uu xirfad u leeyahay, markaa waad ogaan doontaa inaad raacdo talooyinka qoraaga iyo in kale. Ma awoodi doontid inaad waxbadan ka barato qoraaga, laakiin shaybaarada horudhaca bilaashka ah, waxaad awood u yeelan doontaa inaad fikrad ka hesho sida isagu ama iyadu ay kaaga caawin karaan qoraalkaaga qoraalka qorista.
Mawduucyada maqaalka kuleejka way adkaan karaan in la qoro, gaar ahaan haddii aad ku cusub tahay. Si kastaba ha noqotee, haddii aad mid u qoreyso sabab gaar ah, sida inaad ku guuleysato deeq waxbarasho ama abaalmarin, markaa way kuu sahlanaan lahayd haddii aad taqaanno sida loo qoro qormada si sax ah. Haddii aad dhibaatooyin ku haysato, markaa waxaad had iyo jeer caawimaad ka raadin kartaa qoraa ku takhasusay qorista qoraalka.